We She Me: ဟစ် ၃ သိန်းပြည့် အမှတ်တရ
June - 3/29/09, 2:26 AM
Congratulation !!!!! :)
ဇနိ - 3/29/09, 4:02 AM
မျက်စိရှေ့တင်ပဲ ဟစ်တသိန်း ဟစ်၂ သိန်း.. ဟော အခု ဟစ် ၃ သိန်း....
ကျနော့်ဘလော့ဂ်ကနေ ရောက်လာတာ နည်းလို့ စိတ်မကောင်းပါဘူး.. ကျနော့်ဆီကိုလည်း အလာများတာ ကိုအန်ဒီဆီကပါပဲ... တပါတည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပါရစေ..
Phyo Evergreen - 3/29/09, 4:08 AM
Hit ၃သိန်းဆိုတာနည်းတာမဟုတ်ဘူး..။ ဟုတ်တယ် ဘေးက Feed Roll လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်။ ပို့စ်မရှိရင်တောင် အဲဒါကိုတော့အမြဲလာကြည့်တယ်။ ထပ်တူဝမ်းသာပါတယ်။
Phyo Evergreen - 3/29/09, 4:09 AM
ခုတောင် Feed roll လာကြည့်ရင်း ပို့စ်သစ်နဲ့တိုးတာ။
Nu Thwe - 3/29/09, 9:35 AM
မနက်ကတည်းက ဟစ်သုံးသိန်း ပြည့်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်။ ပို့စ်တောင် မတင်ရသေးဘူး။ မအားတာနဲ့ ခုမှ ပြန်လာတော့ ပို့စ်အသစ်ပါ ဖတ်ရတာပေါ့လေ။ ပထမဆုံး congratulate လုပ်သူတော့ မဖြစ်တော့ဘူး။ It is the thought that counts လို့တော့ ဆိုရိုး ရှိတာပဲ ဟဲဟဲ။
မီယာ - 3/29/09, 10:04 AM
ပို့စ်အသစ်မတက်လည်း လာဖြစ်ပါတယ်... ဓါတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်လိုက်... လင့်ထားတဲ့ ပို့စ်တွေဖတ်လိုက် ကော်မန့်တွေ ဖတ်လိုက်နဲ့ပေါ့... congratulations!!!
Ko Paw - 3/29/09, 10:44 AM
ဒီလူ မျက်နှာစူပုပ် ထားပေလို့သာပဲ။ နို့မဟုတ်ရင် ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေလို့ တုတ်နဲ့ ရမ်းရကိန်းရှိတယ်။ (ဘလော့ဂျာ သူမရေ….. စိတ်မပူဘူးလားဟင်)
ပွဲစားခ ပေးပါ…. ကိုအင်ဒီ။
ကျနော်လည်း ကိုအင်ဒီဘလော့ဂ်ကို တနေ့ နှစ်ခေါက်လောက်တော့ အနည်းဆုံး ရောက်ဖြစ်တယ်။ ပို့စ်အသစ်မတင်တောင် ဘေးက ဘလော့ဂ်အညွှန်းကတဆင့် ကိုအင်ဒီညွှန်းတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို တဆင့်သွားဖတ်ဖြစ်တယ်။
MrDBA - 3/29/09, 12:39 PM
ဝမ်းသာရပါကြောင်း ကိုအန်ဒီရေ။ အသစ်မရေးလဲ အမြဲလာဖတ်ပါတယ်။ ကိုအန်ဒီဆီကနေ ကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့လူလာတဲ့နေ့ဆို အားရစရာကြီး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖတ်ကောင်းအောင် အမြဲကြိုးစားပါ့မယ်။
TZA - 3/29/09, 12:53 PM
အိမ်ရှင်နဲ့ထပ်တူ ဝမ်းသာမိပါတယ်ဗျ၊ ဆက်လက်ရေးသွားပါဗျ၊ ဘလော်ဂျာက တွန်းအားများများပေးပါဗျ။ :p
sandra - 3/29/09, 1:25 PM
ပို့စ်အသစ်မရှိလည်း ကလေးဓာတ်ပုံလေးတွေကြည့်၊ ဘေးက ပိုစ့်အသစ်တွေဆီသွားနဲ့ အမြဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Anonymous - 3/29/09, 2:09 PM
ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ ဘလော့မှာ နေ့တိုင်းလိုလို ပျော်ပျော်ကြီး ကောမန့်ပေးနေကြပေမည့် မှားတာကို ထောက်ပြဖို့တို့ ဝေဖန်ဖို့တို့ ဆွေးနွေးဖို့တော့ ကောမန့်ပေးခဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ မရင်းနီးတဲ့ သူရဲ့ ဘလော့ဂ်ဆိုရင်ပါ။ Anonymous နဲ့ ပေးလို့ရရင်တောင် ပေးခဲပါတယ်။ ဒါကိုကပဲ ချစ်စရာ မြန်မာ ဘလော့ဂ် ဓလေ့လို့တောင် ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ကိုအန်ဒီ - အပေါ်ကအချက်က ချစ်စရာဆိုတာထက် ဘလောဂ့်လောကမှာ လောက၀တ်တွေများလာတာကို ပြတယ်လို့ ထင်တယ် ။ လူတွေက လူ့လောကမှာလည်း လောက၀တ်လုပ်ရ ၊ ဘလောဂ့်လောကမှာတောင် လောက၀တ်လုပ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ပင်ပန်းစရာဖြစ်မနေဘူးလား ။
တချို့ဘလောဂါ့တွေကျတော့လည်း ထောက်ပြ ဝေဖန် ဆွေးနွေးပါလို့ အမြဲဖိတ်ခေါ်နေပေမယ့် စာဖတ်သူက တကယ်ထောက်ပြရင် မခံနိုင်ဖြစ် ၊ သူလိုချင်ရာကိုပဲ ပြန်ဆွဲပြော ၊ ဒါမှမဟုတ် ငါ့စာမကြိုက် ငါ့ဆီလာမဖတ်နဲ့လို့ ပြောလို့ပြော ။ ဖြစ်သွားတာတွေဥပမာပြရရင်တော့ ကိုပေါ နဲ့ မနော်ဟရီတို့ကို အရင်ဆုံးဥပမာပြရမယ် ထင်တယ် ။
မြန်မာဘလောဂ့်လောကဆိုတာ လူတွေ ကိုယ့်အမြင်ကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့ ရန်လိုမှုတွေကင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တူသူတွေရနိုင်တဲ့ နေရာတခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့လို စာဖတ်သူတွေအတွက် အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာစရာနေရာတခုဖြစ်သွားမှာပါ ။ ခုချိန်မှာတော့ ဘလောဂ့်ရေးသူများလာပေမယ့် ဘလောဂ့်ဖတ်သူတောင်နည်းသွားသလားလို့ ကျနော်တော့ထင်မိတယ် ။
ကိုအန်ဒီဘလောဂ့်ကတော့ ကျနော်ဖတ်တဲ့ဘလောဂ့်တွေထဲပါတုန်းပါပဲ ။
Kay - 3/29/09, 2:11 PM
ကိုအင်ဒီရေ- တသိန်းမှ ၂သိန်း- ၂သိန်းမှ ၃ သိန်း- ၃ သိန်းမှ- ဆက်လက်၍ သိန်းပေါင်းများစွာ-
ကျမ အမြင်ဆို ကိုအင်ဒီက.. curve က peak ရဲ့ဘေးကို ယောင်ယောင်လေး စောင်းသွားပြီ ဖြစ်ပေမဲ့ (ရေးသူဖက်ကပြောတာလေ)..ဖတ်သူတွေဖက်ကတော့..peak ပေါ်မှာ ပဲ ရှိနေကြသေးတယ်။ ဒါကလဲ.. စာဖတ်သူတွေရဲ့ brand loyalty ဖြစ်မယ်။ ဘလော့ဂါ ရဲ့ ထူးခြား စွဲဆောင်နိုင်မူလဲ ပါမယ်။ ကိုအန်ဒီပြောသလို..ဘေးက..ဖတ်စရာလေးတွေကလဲ..အဓိကပါတာပေါ့။
ဘာပဲပြောပြော..ကိုအန်ဒီ သုံးသပ်ပြသလိုဆို- မြန်မာဘလော့ဂိုစဖီယားကြီးက..တော်တော် တန်ဖိုးတက်နေပြီပဲ။ ဖတ်သမားတွေ..ဘလော့ဂါတွေအတွက်လဲ..မျက်မှန်ခတွေ တက်ကုန်ပါပြီ။း)
nu-san - 3/29/09, 3:00 PM
အားကျလိုက်တာ.. ဟစ် ၂ သိန်း ၃ သိန်းက ခဏလေးလိုပဲနော်... အမဆီကိုလည်း Andy Blog ကနေ လာကြတာ များတယ်.. နောက်ပြီး WeSheMe ကိုတော့ ရုံးကနေ ၁ ခါ အိမ်ကနေ ၁ ခါ အနည်းဆုံးတော့ တနေ့ ၁ ခါ ၂ ခါလောက် ၀င်ကြည့်ဖြစ်တယ်.. ကလေးပုံတွေ ထိုင်ကြည့်တယ်.. feed roll ကနေ ပို့စ်အသစ်တွေ သွားဖတ်ဖြစ်တယ်.. အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ.. :)
Republic - 3/29/09, 6:31 PM
ပို့စ်တွေအတွက် အားလည်းရပါတယ် အားလည်းကျပါတယ် ကိုအန်ဒီ ၊၊ မင်္ဂလာပါဗျာ
pandora - 3/29/09, 9:51 PM
tz - 3/29/09, 9:58 PM
ဟစ် ၃သိန်းမှသည် နောက်ထက်ပေါင်းများစွာသို့ ဆက်လက်၍ ဘလော့ဂင်းနိုင်ပါစေ။
Anonymous - 3/29/09, 11:35 PM
၀မ်းသာပါတယ် ဦးဦးအန်ဒီရေ။ ဟစ် ၃ သိန်းက ခဏလေးလိုပဲနော်။
subuueain - 3/30/09, 12:54 AM
အာ အများကြီးပါလား။ congratulations ပါရှင်။
ကျွန်မ ဆီကို လည်း wesheme က link တဲ့ 
နေ့ ကျရင် အဝင်များတာ
မို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် :D
JulyDream - 3/30/09, 1:57 AM
ကိုအန်ဒီဘလော့ ဘေးက Feed Roll ရှိနေတော့ မကြာခဏ လာချောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ဟစ်ကောင့် သုံးသိန်းတောင် ရပြီဆိုပဲ။ အားရစရာကြီးပဲဗျာ။
Thant - 3/30/09, 12:21 PM
ကိုအန်ဒီရဲ့ Feed Roll ( ဘလော့ဂ်ရွာရဲ့တံခါးပေါက် ) ကနေပဲ ဘလော့ဂ်ရွာတစ်ခုလုံးကို လည်ဖြစ်သွားတာ ။ အခုထိလည်း wesheme ကနေတဆင့်လည်နေတုန်းပဲ ။ Congratulations ပါရှင် ။
Anonymous - 3/30/09, 12:48 PM
nice job for collecting news..
so that u can getalot of hit from yr side news..
any how..saving time..
Mg Naing - 3/30/09, 12:52 PM
even if u didn't post..u can maintain same hit rate by yr side news..
sin dan lar - 3/30/09, 4:05 PM
P.Ti - 3/30/09, 4:21 PM
၀မ်းသာပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါသည်။ အားကျပါသည်။ မနာလိုပါ :P
ZT - 3/31/09, 3:15 AM
Congratulations ပါ။ ကျွန်တော့် ဘလော့ခ်ကို Refer အများဆုံး လုပ်ပေးတဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း တစ်ခါတည်း ပြောပါရစေ။ :)
Moe Cho Thinn - 3/31/09, 9:25 AM
Congratulations ပါ ကိုအန်ဒီ နဲ့ ညီမရေ။
ဟစ် ၃သိန်းဆိုတာလဲ ခဏလေးပါပဲလား။ တခါတခါ အနုပညာပါတဲ့ အသောလေးနဲ့၊ တခါတခါ ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ စနစ်တကျ၊ တခါတခါ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ရမဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ဆိုတော့ ဒီလောက်ဟစ်တက်တာ မလွန်ပါဘူးလေ။
တို့လဲ အမြဲလာဖတ်နေရတာ။ ပို့စ် အသစ်မရှိရင် ဘေးက feed roll ကနေ ပို့စ် အသစ်တွေဆီသွား ရတယ်။ အခု ဘလော့တော်တော်များများမှာ ကိုယ်ပိုင် ကိုယ့်အကြိုက် feed roll လေးတွေနဲ့မို့ ဘလော့ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်၊ ပြီးရင် သူလင့်ထားတာလေးတွေဆီ သွားရတယ်။ သူ့အကြိုက်လေးက ဘယ်လိုဆိုတာ သိနိုင်တယ်။ ကိုအန်ဒီကတော့ စုံအောင် လင့်ခ်ထားလေတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။
တခါတလေများ ဘလော့ဖတ်ရတာ လင့်ခ်တွေ တခုပြီး တခု ကူးရလို့ တာဇံက နွယ်ကြိုးတွေ ခုန်ကူးသွားသလို မြင်ယောင်မိတယ်။
strike - 3/31/09, 6:46 PM
Anonymous - 4/3/09, 6:00 PM
အားကျလိုက်တာ ကျနော်ဆို ရေးတာ တစ်နှစ်ခွဲတောင် ရှိနေပြီး တစ်သိန်းတောင်မပြည့်သေးဘူး ။
BLACK DREAM - 4/17/09, 8:56 PM
ဂုဏ်ယူပါတယ်အစ်ကိုရေ..။ ကော်မန့်တွေမရေးဖြစ်ပေမယ့် အမြဲလာရောက် လေ့လာမှတ်သားဖြစ်တဲ့ ဘလော့လေးပါ...။ နောက်ထပ် Hit တွေ သန်းနဲ့ချီပြီး တော့လည်း ရရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်...။